Izinto zeGlobal zeLizwe zikaLoliwe ziza e-Eskisehir | RayHaber | raillynews
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia26 EskisehirIzigebenga ezinkulu zehlabathi kuloliwe uza e-Eskisehir
10 / 12 / 2019 26 Eskisehir, railway, imisebenzi, JIKELELE, ZOMHLATHI, ETURKEY
oololiwe abakhulu abeza e-Eskisehir
Izinto zeGlobal zeLizwe zikaLoliwe ziza e-Eskişehir; Ilungiswe nguModem Fuarcılık ngenkxaso yeCandelo loMphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo Umboniso weShishini loLoliwe Izibonelelo zecandelo lezoMgaqo woLoliwe kunye neTekhnoloji yeTekhnoloji ziya kuzisa badibanise bonke oololiwe ngokufumana imali eyi-500 yeebhiliyoni zeerandi kubavelisi bendawo kwimarike yehlabathi e-Eskişehir.
Ukubala sele kuqalile uMboniso woShishino loLoliwe, iZiseko zoShishino zoLoliwe kunye neTekhnoloji yeTekhnoloji, ejolise ekudibaniseni abameli becandelo labucala labecandelo lezomgaqo kaloliwe bamanye amazwe. Umthendeleko uhlelwe ngenkxaso yeCandelo loMphathiswa Wezothutho kunye neZiseko ezingasetyenziswayo ngo-Epreli 14-16, 2020 nombutho welean Fairs. I-Eskişehir yoLawulo, i-TCDD yezoThutho Inc., i-Ankara Chamber ye-Intanethi; I-Eskişehir Chamber of Commerce, Eskişehir Chamber of Trade, Eskişehir OSB, I-DSMOB Chamber yeeNjineli zoMbane u-Eskişehir isebe, iDTD Railway Association Association, kunye noMbutho weendlela zoMzila woLoliwe phakathi kwamaziko axhasa lo msitho.
Umdla, oya kubanjwa ngokuthatha inxaxheba kweenkampani ezili-15 zasekhaya nezangaphandle ezivela kumazwe ayi-100 nangaphezulu kweendwendwe ezingaphezu kwama-3, ziya kuba sisiseko sokuseka unxibelelwano lwamashishini amatsha kunye nokwakha ubudlelwane obukhoyo. Abadlali abakhokelayo becandelo elinesabelo kurhwebo lwehlabathi kwi-500 yeebhiliyoni zeerandi baya kuthatha inxaxheba kulungelelwano. iinkampani eTurkey ihlabathi lwezibonelelo, superstructure, ubugcisa, ukhuseleko, umbane, kweesiginali ne-IT ziya kuba abenzi ukukhanya inkqubo kaloliwe, kwakunye Rail Industry Bonisa kunxibelelwano.
Iiprojekthi ziya kudibana kunye nabanini bezemali Kusuku olungaphambi kokuba kwenziwe umnyhadala, inkomfa iza kubanjwa nge-13 ka-Epreli- nxaxheba ngokuthatha inxaxheba kwabatyali-mali boololiwe kunye nabanini beeprojekthi. Iiprojekthi, iimodeli zokuxhasa ngemali kunye nemithombo ziya kuthi zixutywe ngaphakathi kwinqanaba lenkomfa. Le nkomfa iza kubandakanya iibhanki, abaphathi bengxowa mali, abamele oorhulumente bamakhaya nabangaphandle, oorhulumente beengingqi, ukubonisana nge projekthi, i-inshurensi kunye neenkampani zomthetho. Ngokwesicelo, iintlanganiso zomntu ngamnye zokusebenzisana nazo ziya kulungelelaniswa. Emva kwenkomfa, isemina eyahlukileyo iya kubanjwa ngokufanayo kunye nomxholo apho kuya kuxoxwa ngezihloko zecandelo.
Itekhnoloji, eyemfundo kunye neyeMveliso 4.0 izihloko ziya kuxoxwa ziingcali ngexesha leenkomfa eziza kubanjwa ngexesha elifanelekileyo. uphuhliso kololiwe eTurkey, phakathi imiba eya kuvavanywa 2023 kwaye kufuneka ukuba yenziwe, zilungiselele ukuba oomasipala lihambisana mali panel yangaphantsi eyahlukileyo.
Isiseko sekhaya Eskisehir
U-Eskişehir Chamber weSihlalo wezoRhwebo u-Metin Güler wathi inkundla ibaluleke kakhulu ku-Eskişehir kwaye wathi: şüphesiz sesinye sezizathu ezibaluleke kakhulu zokuba igumbi lethu ligqibe ukutyala imali kwi-Eskişehir Fair Convention Centre lishishini loliwe. Icandelo loMphathiswa Wezophuhliso lathi lasinika inkxaso enkulu yesixeko saseAnatolia. Ukwenza igalelo kumandla obambiso kaloliwe, ukuhamba ngenqwelomoya kunye neekhephu zodidi zezona zinto kujoliso zibalulekileyo kwishishini elifanelekileyo eziza kwenziwa e-Eskişehir. Umakhi abarhola ilizwe lethu libe lishishini zale mihla sub-mveliso, ulawulo yorhwebo Eskişehir'deyken eyodwa yonqumlo bakwaloliwe e Turkey ukuze ngokwendalo kwiphondo lethu. "
Ummandla ubalulekile ngokweqhinga
UMoris Revah, uMlawuli Jikelele weeFairs zala maxesha, wathi banenjongo yokwenza umsebenzi oncomekayo ngeZibonelelo zoMatshini woLoliwe kunye neTekhnoloji yeTekhnoloji. U-Revah uthe, kapsamında Ngaphakathi kwinqanaba lo mbutho ubalulekileyo, kungekuphela nje kodwa, kodwa neenkomfa kunye neziganeko ezahlukeneyo ziya kwenzeka. Ngokukodwa, usuku olungaphambi kokuba kuvulwe indibano, siququzelela inkomfa ebaluleke kakhulu kunye neengcali kwicandelo lezemali. Abezemali, ekuqalekeni kwemali kwiindlela zikaloliwe kwinqanaba lehlabathi, baya kuza kwilizwe lethu. Aba bantu bazokwazi ukunxibelelana ngqo neenkampani emva kwenkomfa. "
Egxininisa ukuba eyona nto ibaluleke kakhulu kuphuhliso lwelizwe kukunxibelelana koololiwe, u-Revah uthe: "Inkqubo kaloliwe ayisixhasi nje kuphela ukugcwala ezindleleni kodwa kunye nemodeli yezothutho efanelekileyo. Ungalayisha ukuya kwiitoni ezingama-25 kwi-TIR, kodwa kunokwenzeka ukulayisha kuphela iitoni ezingama-60 kwinqwelo. Xa kukho iinqwelo ezingama-50 kuloliwe, kucacile. Ukongeza, izithuthi zikaloliwe ngamaxabiso angama-60 epesenti kunolwandle kunye neepesenti ezingama-80 ngexabiso eliphantsi kunendlela ephezulu.
I-TÜVASAŞ ithathe inxaxheba kwi-Inno trans 2012 yaseBermany ibulungisa kunye nezikhulu zehlabathi
Edreyi World ngokukhawuleza ukuba bathengise kaloliwe e Turkey
Iimfazwe zehlabathi zilungiselela i Kanal Istanbul
Iimpawu zeZakhiwo ezidibeneyo zidibana nonyaka ngamnye kwi-logitrans
IiGiants of Asia ziya kuphawula i-İzmir International Fair
Turkey Giants waye wayila seCandelo Railway eThrace
Umzila omkhulu wesitimela uza
I-Istanbul-Eskişehir indawo kaloliwe yesithili saseGeveve Orencik ...
Isaziso seTender: Ngaphakathi kuMhlaba weMisebenzi ephantsi komhlaba ka-Eskişehir Garda Railway…
TÜLOMSAŞ Global Inkampani
ISaziso seTender: Ukuthengwa kweeNgqungquthela ze-Global (TÜVASAŞ)
Ihlabathi leTurkey liba yintloko yezoqoqosho jikelele
I-International International FIDIC Workshop eMpuma Mpuma
Ukunyuka kwiimarike zomhlaba ngomzila
IiG Giants zeNdawo zoLoliwe